Sacuudiga oo gabi ahaanba qaadaya bandowgii cudurka Coronavirus ee uu dalkiisa kusoo rogay - Calanka TV
Sacuudiga oo gabi ahaanba qaadaya bandowgii cudurka Coronavirus ee uu dalkiisa kusoo rogay
Sacuudi Carabiya ayaa shaaca ka qaadday maanta oo Axad ah iney gabi ahaanba qaadeyso dhammaan bandowgi ka dhashay coronavirus, iyada oo sheegtay iney xayiraadaha kale dalka sii saarnaanayaan.
Hay’adaha dowladda Sacuudiga waxay sheegeen in dib loo furayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyo ganacsi ee dalkaasi, balse waxay xayiraadda sii saarnaan doontaa socdaallada caalamiga ah iyo munaasabadda xajka.
Boqortooyada Sacuudiga ilaa iyo kama aysan hadal xilliga munaasabadda xajka ee sanadkan ay billaabmeyso, maadaamaa munaasbadda xajka ay billaabmeyso dabaqayaaqada bisha July.
Waddama dhowr ah oo ay ka mid yihiin, dalalka Malaysia iyo Indonesia waxay horay u sheegeen iney muwaaddiniintooda u oggolaaneyn iney sanadka xajka gutaan.
Ku dhawaad 2.5 malyan oo xujaaj ah ayaa sanad walba u socdaala magaalada barakeysan ee Maka si waajibka xajka u gutaan, xajka oo ka mid ah waajib saaran qof kasta oo muslim ah oo awooda gudahshada xajka.
Sacuudi Carabiya waxaa laga diiwaangeliyey 155,000 inuu cudurka haleelay 1,230 ay cudurka u dhinteen, sida ay tibaaxeyso xogta ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins.
Balse wakaaladda wararka ee AFP waxay sheegtay tirada dadka uu cudurka haleelay iney intaasi ka badan karto.
Xayiraadaha adag ee ka dhashay coronavirus ayaa waxay dowladda Sacuudiga soo rogtay bishii March.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ka codsatay dhammaan Muslimiinta ku nool daafaha dunida in ay dulqaad muujiyaan islamarkana ay dib u dhigtaan qorshahooda Xajka iyo Cumrada ee sanadkan.
Wasaaradda Xajka iyo Cumrada Sacuudiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Corona awgii ay tahay in Musliminta ay dib u dhigtaan qorshooyiinkooda Xajka.
Wasiirka arrimaha Xajka iyo Cumrada, Dr. Maxammad Saleh bin Taher Benten, ayaa sheegay in Sacuudiga ay mar walba diyaar u yihiin inay qaabilaan islamarkana ay u adeegaan Xujeyda, balse iminka mudnaanta la siinayo badqabka qof walba.
“Sacuudi Carabiya ayaa imika daryeel siinaysa 1,200 oo qof uu cumara u tagay kuwaasi oo aan dalkoodii u laaban karin, sidoo kale waxaan lacagaha u celinaynaa dadka la siiyay dal ku-galka Cumrada, balse aan cumraysan,” Benten ayaa sidaasi u sheegay telefishinka al-Ekhbariyah.
Xukuumadda Sacuudiga ayaa horey u joojisay in lagu dhawaafo Xajarul Aswadka, iyada oo laga cabsi qabo faafidda caabuqa Corona.
Xajka ayaa ka mid ah 5-ta tiir ee Islaamka islamarkana laga rabo qof walba oo Muslim ah oo dhaqaala ahaan awooda in uu hal mar soo Xajiyo.
© 2020 Calanka TV. All rights reserved.